Helitaanka go’aanka megangelyadu wuxuu qaataa inta badan waqti dheer - Asylum in Finland
Marka aad codsiga megangelyada ku sameyso Finland waxaa laguugu hagayaa xarunta qaabilaadda oo aad ku sugeyso ka baaraandegista codsigaada. Codsiyada megangelyada waxaa inta badan looga baaraandegaa sida ay u soo kala horeeyaan. Si kastoo ay ahaataba, haddii aad megangelyo ku codsaneyso tusaale ahaan sababo caafimaad ama dhaqaale oo kaliya, codsigaada waxaa looga baaraandegayaa si ka dhaqso badan kuwa kale, natiijada ugu danbeysana waa diidmo.
Hay’adda socdaalka ayaa kula soo xiriireysa haddii laguugu yeerayo wareysiga megangelyada ama faahfaahin dheeraad looga baahdo codsigaada. Sida kale waxaa lagula soo xiriirayaa oo kaliya marka go’aanka la gaaro. Telefoon lagu weydiiyo, imayl la soo diro ama imaanshaha goobta adeeggu ma dedejiyaan ka baaraandegista arrinta. Hay’adda socdaalka ayaa kula soo xiriireysa haddii laguugu yeerayo wareysiga megangelyada ama faahfaahin dheeraad looga baahdo codsigaada. Sida kale waxaa lagula soo xiriirayaa oo kaliya marka go’aanka la sgaaro. Telefoon lagu weydiiyo, imayl la soo diro ama imaanshaha goobta adeeggu ma dedejiyaan ka baaraandegista arrinta.
Shaqada baaritaanka iyo ka baaraandegista codsigu waxey qaateen bilooyin badan. Wareysiga megangelyada marka lagu jiro ayaa laguu qabanayaa waqti qiyaas ah oo aad go’aanka megangelyada ku heleyso. Si kastaba ha ahaatee waa ay adag tahay in codsiyada shaqsiga ah laga bixiyo qiyaas rasmi ah oo ku saabsan waqtiga ka baaraandegista. Waqtiga ka baaraandegista waxaa saameyn ku leh tusaale ahaan in la dalbado faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan codsiga.